Isidakamizwa esithi "Neurobion" sinezinkinga zamavithamini B: pyridoxine (B6), thiamine (B1) ne- cyanocobalamin (B12). I- vithamini yeqembu B isebenza njengama-coenzymes, iqembu lama-molecule aphilayo okudingekayo ukuze alondoloze umsebenzi wokusebenza we-enzyme, futhi anesibopho sokusebenza kwesimiso esifanayo esenzeka ohlelweni lwangaphakathi nolunye lwezinzwa.
Iyini injongo yomuthi "Neurobion"
Ukuhlanganiswa kwamavithamini eqembu B, elisetshenziselwa i-Neurobion, kulungiswa ukuthi ukuvuselelwa kwezintambo ze-nerve ezilimele kuphuthumayo ngenkathi ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa. Ukuhlanganiswa kwalezi zakhi ekusebenzeni kuhle kunomphumela wokusebenzisa izingxenye ezifanayo ngokwehlukana.
Ngaphezu kwalokho, amavithamini B ahlobene nezakhi ezingakhiwa ngqo emzimbeni. Ezifo, umzimba udinga kakhulu amavithamini anjalo, njengoba ivuselela izindlela zemvelo zokubuyisela imisebenzi yamangqamuzana namascuba, okuyinto eyenzeka ngesikhathi se-Neurobion. Imiyalo yokusetshenziswa iphinde ikhombise umphumela we-analgesic walolu phiko oluyinkimbinkimbi. Lokhu kunomphumela omuhle emiphumeleni yokwelapha yalesi mithi.
I-vitamin B1, engxenyeni yemithi ye-Neurobion, ihlanganyela ezinkambisweni zokuxuba kwamakhemikhali namafutha, futhi iyathinteka kakhulu ekuthuthukiseni nasekukhuleni izinqubo, isekela ukusebenza kanye nomsebenzi wezitho zangaphakathi njengenhliziyo nokugaya ukudla.
Ngokuphathelene ne-vitamin B6, ephinde yahlanganiswa neNeurobion, imfundo ibonisa ukubamba iqhaza kwalesi sici ngenqubo yokuhlanganiswa kwamaseli abomvu obomvu, ukusetshenziswa kwe-glucose nge-neurons, amaprotheni kanye ne-lipid metabolism, futhi kuqinisekisa ukusebenza kwesibindi esijwayelekile.
Ngokuntula i- vitamin B12 , ezinye izinhlobo ze-anemia zingase zenzeke.
Isidakamizwa esithi "Neurobion", imfundo esinqumayo yokusebenza okuyinhloko yokwelapha njengokwenziwa kabusha kokuntuleka kwamavithamini B, isetshenziselwa futhi njenge-agent ehambisanayo ekwelapheni kwe-neuralgia neuritis. Lezi zifo ezifana ne-intercostal neuralgia, i-nerve triadal, i-polyneuropathy, i-prozoplegia ( izifo zesifo sobuso), ubuhlungu obubangelwa izifo zomgogodla.
Qhubeka uhlu lwe-lumbago (ngamanye amagama, i- lumbago), i- sciatica, i-plexitis (i-brachial noma i-plexus yomlomo wesibeletho), i-lumbar syndrome, i- neuritis enkulu-nalokhu, futhi, kusho "i-Neurobion." Ama-ampoules for injection akhishwa ngevolumu ye-3 ml, isixazululo sijojowe nge-intramuscularly, kodwa hhayi nganoma yisiphi indlela ngaphakathi.
Ubude benkambo kanye nesilinganiso somuthi kunqunywe udokotela ngabanye.
Ukungafani kokuthatha imithi "Neurobion"
Ngesikhathi ukusetshenziswa kwesidakamizwa "Neurobion" kunqatshelwe ukuphuza utshwala. Ngokuphathelene nokusebenzisana phakathi kwezidakamizwa, kutholakala kuphela umuthi othi "i-Levodopa", esetshenziselwa ukwelashwa kwesifo sikaParkinson. I-Vitamin B6 inganciphisa ukusebenza kwayo yokwelapha.
Phakathi kwemiphumela emibi yesikhombisi somuthi "Neurobion" amanothi, ezimweni ezingavamile, ukusabela kwe-anaphylactic okuhlobene nokuzwela okwandayo kwizingxenye zalesi sidakamizwa. Ngakho-ke, lesi sidakamizwa siyaphikisana nalabo abanesifo se-hypersensitivity ezingxenyeni zomuthi "Neubion". Futhi, ungayisebenzisi izingane kuze kube yiminyaka emithathu.
Ayikho idatha emiphumeleni engathandeki ekukhulelweni nase-lactation uma isetshenziselwa ukulinganisa okunconywayo. Isidakamizwa asithinti ukugxila, ngakho-ke, ekuphathweni kwezimoto nezinye izindlela.
Amaconsi eso "Tsipromed": imiyalelo yokusetshenziswa
Aquarius - indoda. sici